Orinasa sy mpanamboatra China FerroChrome | Feng Erda
Ferrochrome (FeCr) dia firavaka chromium sy vy misy eo anelanelan'ny 50% sy 70% chromium. Maherin'ny 80% -n'ny ferrochrome manerantany no ampiasaina amin'ny famokarana vy vy. Raha ny atin'ny karbaona dia azo zaraina ho: ferrochrome avo lenta / HCFeCr (C: 4% -8%), ferrochrome enim-by ferrochrome / MCFeCr (C: 1% -4%), ferrochrome karbona ambany / LCFeCr (C: 0.25 % -0.5%), Micro carbon ferrochrome / MCFeCr: (C: 0.03-0.15%). Sina noho ny fampitomboana ny ampahany amin'ny famokarana ferrochrome manerantany.
Ferrochrome (FeCr) dia firavaka chromium sy vy misy eo anelanelan'ny 50% sy 70% chromium. Maherin'ny 80% -n'ny ferrochrome manerantany no ampiasaina amin'ny famokarana vy vy. Raha ny atin'ny karbaona dia azo zaraina ho: ferrochrome avo lenta / HCFeCr (C: 4% -8%), ferrochrome enim-by ferrochrome / MCFeCr (C: 1% -4%), ferrochrome karbona ambany / LCFeCr (C: 0.25 % -0.5%), Micro carbon ferrochrome / MCFeCr: (C: 0,03 0,15%). Sina noho ny fampitomboana ny ampahany amin'ny famokarana ferrochrome manerantany.
Fampahalalana fototra ：
Marika Iraisam-pirenena Ferrochrome （GB5683-2008）
firafitry ny simika （wl%）
①Nampiasaina tamin'ny famokarana vy vy， Ny vy tsy miankina dia miankina amin'ny chromium amin'ny endriny sy ny fanoherana ny harafesina.
②Izy no tena mampifangaro firaka amin'ny fanaovana vy
③Ampiana ilaina amin'ny famolavolana vy tsy misy karbonina ambany
Previous: Firafitra mangan'ny silika
Manaraka: Manamboatra vy vy
Vidiny Ferro Chrome
Carbon Ferro Chrome avo
Carbon Ferro Chrome ambany